accessiBe: Mampiasa ny faharanitan-tsaina artifisialy hifehezana ny fahazoana miditra amin'ny tranokala | Martech Zone
Alahady 21 Febroary 2021 Talata, Febroary 23, 2021 Douglas Karr
Na dia efa an-taonany maro aza ny lalàna mifehy ny fahazoana miditra amin'ny tranokala, tsy nihetsika ny orinasa. Tsy mino aho fa resaka fiaraha-miory na fangoraham-po amin'ny lafiny orinasa… Tena mino aho fa miady mafy ny hitazona ireo orinasa.
Ohatra, Martech Zone ambany toerana noho ny fahazoana miditra. Rehefa nandeha ny fotoana dia niasa nanatsara ny fikajiana sy ny famolavolana ary ny metadata aho… saingy zaraiko ny manaraka fotsiny ny momba ny atiny sy ny famoahana tsy tapaka. Tsy manana ny vola miditra na ny mpiasa aho mba hitahiry an-tampon'ny zavatra ilaiko rehetra… Manao ny tsara indrindra vitako aho.
Tsy mino aho fa izaho no ankanavaka eto… raha ny tena izy manaitra ny isa rehefa mandinika ny tranonkala sy ny fampiharana ny fenitra azo idirana ianao: